Trailer yekutanga yemwaka wechipiri we ONA ikozvino yavapo | Ndinobva mac
ONA Mwaka XNUMX Yekutanga Trailer Zvino Inowanikwa
Kubva mwaka wekutanga weSEE watanga, hatina kana kana nhau nezve kugadzirwa kwemwaka wechipiri, mwaka wechipiri. iyo yekutanga turera Apple yakangotumira pane yayo Apple TV + YouTube chiteshi.
Mumwaka uno wechipiri, kutora chikamu kwe Dave Bautista, anozivikanwa nekutamba Drax muVachengeti veGirazi bhaisikopo uye nekuve aimbove shasha yeWWE heavyweight. Mwaka wechipiri uyu uchatanga kuratidzwa kupera kwaNyamavhuvhu, kunyanya musi wa27.
Sezvo isu tichigona kuona iyo faira yezvikamu izvi muIMDB, Dave Bautista kutora chikamu muzvikamu zvisere zvese izvo zvinoumba mwaka wechipiri uyu. Pamwe naBautista, dzosa Jason Momoa, Eden Epstein, Tom Mison, Hoon Lee, Olivia Cheng, David Hewlett naTamara Tunie pamwe naSylvia Hoeks saMambokadzi Kane naChristian Carmago saTamacti Jun, vatambi vatakatosangana navo mumwaka wekutanga.
Nguva yakatarwa yakataura kuti Apple yakatovandudza nhepfenyuro ino kwemwaka wechitatu uye kuti kutora mifananidzo kuri kutoenderera kuCanada. Zvinotaridza kuti kubva kuApple vakasarudza pfura mwaka wechipiri newechitatu pamwechete, icho chingave chiratidzo chekuti mwaka wechitatu uchave wekupedzisira.
Ona haina kugamuchirwa zvakanaka nevatsoropodzi
PaRotter Tomato, mwaka wekutanga we ONA une Chikamu chakakosha 43%, apo veruzhinji vachisimudza chinyorwa kusvika ku85%. Sezvakataurwa naApple panguva yekuratidzwa kweApple TV +, mune yayo yekutenderera vhidhiyo papuratifomu ichapa mubairo pamusoro pehuwandu, uye ikozvino nhevedzano iyi inoita kunge haina kuzadzisa zvinangwa zvayo zvekutanga, zvirinani sekureva kwevatsoropodzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » ONA Mwaka XNUMX Yekutanga Trailer Zvino Inowanikwa
Apple inobvunza vanogadzira kana vachida WWDC22 vakatarisana kana kwete
Mac naMonterey uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac